प्रमिलाकी यस्ती राम्री छोरी जन्मिइन, कता होलान श्रीमान् ?(भिडियो) « Np Online TV
प्रमिलाकी यस्ती राम्री छोरी जन्मिइन, कता होलान श्रीमान् ?(भिडियो)
पाँचथरः अन्तरजातीय विवाह गरेकी पाँचथरकी प्रमिला शिवाको यतिवेला विजोग अवस्था भयो । १ बर्ष अगाडी प्रेम विवाह गरेकी शिवाका श्रीमानले उनी गर्भवती भएसंगै छाडेर हिडेपछी उनको विजोग भएको हो । समाजले पटक पटक गर्भपतनको दवाव दिदा समेत सन्तानको मायाँकै कारण जन्माउने हिम्मत गरेकी शिवाले आज विहान सुन्दर छोरीलाइ जन्म दिएकी छन् । दलित समुदायकी यि किशोरीले लिम्बू समुदायका यूवा संग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् तर गर्भवतसी अवस्थामा एक्कासी श्रीमान हराएपछि उनको बिचल्ली भएको हो ।
गर्भको बच्चाको मायाँ लागेर भिडियो एक्सरे गर्न जाँदा स्वास्थ्य चौकीमा ८ सय रुपैया मागेको तर आफु संग पैसा नभएपछी त्यसै फर्किएको उनको भनाइ रहेको छ । श्रीमानले छाडेर बेपत्ता भए अहिले हल्ला सुन्छिन उनका श्रीमानले अर्कै केटी लिएर हिडेका छन् । गर्भको बच्चाको मायाँ लागेर भिडियो एक्सरे गर्न जाँदा स्वास्थ्य चौकीमा ८ सय रुपैया मागेको तर आफु संग पैसा नभएपछी त्यसै फर्किएको उनको भनाइ रहेको छ । एक दिन आफ्नो श्रीमान आउने आश गरेरै सन्तानको जन्म दिएको लागेको उनले बताइन् । उनलाइ जिल्ला अस्पताल पाँचथर सम्म ल्याउने काम गैह्र सरकारी संस्था नेपाल जनउद्धार संगले गरेको थियो ।भिडियो: